Waa Maxay Go'aanka Midaysan Ee 20-Kooxood Ee Horyaalka PL Ka Soo Wada Saareen Baaqyada Dhanka Dhaqaalaha Ee Waaxda NHS? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kulan ay yeesheen kabtannada dhamaan 20-ka kooxood ee horyaalka Premier League ayay kasoo saareen go’aan midaysan oo ay kaga jawaabayaan baaqyada isasoo taraya ee ah inay noqdaan cuddudda dhaqaale ee garab taagan waaxda caafimaadka UK ee NHS muddada lagu jiro dagaalka caabuqa Coronavirus oo dalkaasi noqday midka shanaad ee dadka ugu badan ay kaga dhinteen.
Xanuunka coronavirus ayaa si waalli ah ugu sii faafaya adduunka isaga oo guud ahaan ku dhacay dad ay tiradoodu ka badan tahay 1,118,000, waxaana ugu daran Maraykanka oo ah dalka uu dhibka ugu badan ka geysanayo oo uu ku dhacay 277,475 oo 7,402 ka mid ah ay geeriyoodeen. Talyaaniga ayaa labaad ah tirada dadka ugu badan ee uu ku dhacay waxaase uu hoggaaminayaa dhimashada oo ilaa hadda ay u geeriyoodeen 14,681 qof. Waddanka Spain ayaa isagana ay u geeriyoodeen 11,198. Faransiiska ayaa afraad ah oo uu ku dilay 6,507 ruux, halka UK ay ka sare martay dalalka China iyo Iran oo 3,605 qof ay uga geeriyoodeen.
Maalmihii ugu dambeeyey, ciyaartoyda Premier League ayaa loogu baaqayay inay mushaharkooda ka jaraan lacag ay si toos ah ugu wareejiyaan waaxda caafimaadka ee NHS, taas oo muran ay muddo ku jirtay kaddib ay kabtannada dhamaan 20-ka kooxood kulan dhinaca Internetka ah ka yeesheen.
David Silva, Troy Deeney, Simon Francis, Harry Maguire, Cezar Aspilicueta iyo Jordan Henderson oo ahaa hoggaamiyeyaasha kulanka, ayaa waxay isku waafaqeen in bil walba malaayiin Gini ay ugu deeqaan Waaxda Caafimaadka, si ay u badbaadin karaan shacab badan oo laga yaabo inay u geeriyoodaan caabuqa.
Inkasta oo aanay bayaan rasmi ah soo saarin, haddana warbaahinta Ingiriiska ayaa baahisay inay go’aan ku gaadheen in dhamaan ciyaartoyda kooxuhu ay boqolkiiba 30 mushaharkooda ugu deeqaan kooxaha caafimaadka, taas oo noqonaysa garab weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah oo loo adeegsan doono samata-bixinta dadadka.
24-kii saacadood ee ugu dambeeyey, waxa hoos u dhacaysay sumcadda ciyaartoyda Premier League oo lagu eedaynayay in aanay garab istaagayn dadka lacagta badan u hura inay garoomada ugu yimaaddaan ee taageereyaashooda ah waqtigan adag. Waxaana canaan jeediyey masuuliyiin sare oo waaxda dhaqanka iyo ciyaaraha ah.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda ayaa wada bixin doona 30% mushaharkooda, laakiin waxay ka badbaadi doonaan in naadiyadu ay lacag kale ka jaraan muddadan si la mid ah Spain oo Barcelona ay ciyaartoygeeda ka goysay 70% mushaharkooda taas oo aanay xataa ugu deeqin kooxaha caafimaadka ee ay sheegtay inay iskaga badbaadinayso inay musalafto.